Page 126 – तपाईको अनि हाम्रो आवाज
प्याजपछि अब तेलले बि गार्दैछ स्वाद, यस कारण ब ढ्दैछ भाउ
December 5, 2019 kandai kanda 1
काठमाडाैं । नेपाल, भारत लगायतका देशमा प्याजको भाउ आकाश छोइरहेको छ। यो बाहेक अब उपभोक्ताको गोजीमा एक अर्काे मार पर्ने भएको छ। प्याजका साथसाथै अब खाद्य र तेलको पनि भाउ बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। न्यूज एजेन्सी आईएएनएसका अनुसार मलेशिया […]
जब इटालीका सांसदले संसद बैठकमै ग ल्फ्रेण्डलाई यसो गरेपछि…
एजेन्सी । सामान्यतया संसद भन्नाले जनताको प्रतिनिधिले जनताको विषय उठान गर्ने ठाउँका रुपमा लिइन्छ । तर, इटालीका एक सांसदले संसद बैठकमै गर्लफ्रेण्डलाई प्रपोज गरेका छन् । कहिलेकाहीँ सांसदहरूले संसदमा बोल्दा केवल जनताको कुरा मात्र होइन, आफ्नै घरजमका कुरा पनि गर्दा […]
जब भारतीय अर्थमन्त्रीले भनिन्, ‘म धेरै प्याज खा दिनँ, चि न्ता नलिनु
एजेन्सी । अहिले नेपाल मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्याजको चर्चा छ। प्याजको भाउ उकालो लाग्न थालेपछि महंगी नियन्त्रणका लागि भन्दै भारत सरकारले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। नेपालमा पनि प्याजको उत्पादन न्यून हुने भएकाले भाउ ह्वात्तै बढेको छ। यसै […]
भान्सामा औ षधी : ग्या स्ट्रिकबाट छुट कारा र क्या न्सर भगा उन मरिच
काठमाडाैं । जाडो याममा चियामा मरिच राखेर खाने चलन छ । प्रायः जाडो समयमा चियामा राखिने कालो मरिचले न्यानो गराउन मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दछ । यी हुन् मरिचका फाइदा मरिचको सेवनले पेटको दुखाई कम गर्न मद्दत गर्छ । मरिचमा […]
पाल्पा पुगेर पू र्वराजाले भने : ‘देश अहिले अ प्ठ्याराे अ वस्थामा रहेकाे छ’
पाल्पा: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले मुलुकको परिस्थिति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन्। मुलुकको अहित चाहनेहरूले विभिन्‍न चलखेल गरिरहेको उनले दाबी गरेका छन्। धार्मिक भ्रमणमा तानसेन आएका पूर्वराजा शाहले बिहीबार तानसेनस्थित श्री ७ रणउजिरेश्वरी भगवतीमा पूजाआरधना गरेपछि यस्तो बताएका हुन्। देश […]
जहाँ जनताले बाटो न बनेर दु: ख पाएका छन् त्यहाँ अ नशन बस्छु : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समयमै बाटो बनेन भने आफू साँच्चै अनशन बस्ने बताएका छन। बिहीबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढी पुगेका अध्यक्ष दाहालले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘जहाँ पनि अनशनमा बस्छु भनेको छैन । दुई ठाउँमा […]
‘स क्किगोनी’ ! य स्तो छ आजको बाह्रौं भाग – हेर्नुहोस् भिडियोमा
काठमान्डौ । मिडिया हवकै प्रस्तुतिमा नयाँ कथावस्तु, नयाँशैली र नयाँ कलाकारका साथ ‘भद्रगोल’ प्रसारणमा आयो तर नयाँ ‘भद्रगोल’लाई दर्शकले मन पराएनन् र पहिलाकै टीम ‘भद्रगोल’मा आउन पर्यो भन्दै दर्शकले माग राखेपछि पुराना ‘भद्रगोल’का टीमले नयाँ हाँस्य टेलिशृंखला ल्याएका हुन् । […]
काठमाडौं, १९ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै आत्मविश्वासका साथ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । केही दिन बालुवाटारमा आराम गर्ने भनिएपनि बिहिबारबाट काम थालिसकेका छन् । ओलीले निकटस्थ र सल्लाहकारहरुसँग परामर्श थालेर सरकारको कामकारबाहीलाई कडाईका साथ अगाडि बढाउने भएका छन् […]
यीहुन् नेपालकी प्रथम महिला प्रहरी
८७ वर्ष लागेकी काठमाण्डौकी चैतमाया डङ्‌गोलले सपनामा पनि सोचेकी थिइनन् उनले सुरक्षा निकायमा ३२ वर्ष बिताउछु भनेर। चावहिल गणेशस्थान नजिकै बस्ने व्यापारिक पृष्ठभूमिका कान्छा डङ्‌गोल र तरिमाया डङ्‌गोलकी जेठी छोरी चैतमायालाई प्रहरीमा जागिर लगाउनु परिवारको कुनै लालसा पनि थिएन। तर […]
दश वर्षका डैंग वैन ख्युएन भियतनामको एउटा गाउँमा एक्लै बस्छन् । ख्यूएनको बाबु आमा दाजुभाई दिदीबहिनी कोही पनि छैनन् । उनले परिवारका सबै सदस्य गुमाइसकेका छन् । उनकी हजुरआमा पनि नातिलाई छाडेर अर्कै पुरुषसँग विवाह गरेर गइसकिन् । सबैले साथ […]
साहेव ! कतारको भिसा लाग्यो, राजीनामा स्वीकृत गरिपाउँ
काठमाडौं। सत्य सेवा सुरक्षणमको नारासहित शान्ति सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीभित्र जागिर छोड्नेको लर्को लाग्न थालेको छ। २४ घण्टे ड्युटीबाट पेट पाल्न मुस्किल भएपछि देशका सुरक्षा अंगभित्र मात्र होइन, निजामती सेवाका कर्मचारीहरु पनि स्थायी जागिर छोडेर विदेसिन थालेका हुन्। उच्च मनोबलका […]
महराको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो
काठमाडौं– निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको बलात्कार प्रयास आरोपकाे अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। शुक्रबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्रका महराविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको हो। नागरिक न्यूजसँग उनले भने,‘२० […]
बैतडी डोजरकाण्ड : घाइते गौरीलाई थप उपचारका लागि भारत लगियो
बैतडी : बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका ९ ग्वाल्लेकमा डोजरले हुत्याउँदा घाइते भएकी गौरी जोशीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ । धनगढी र नेपालगञ्जमा उपचारपछि पनि गौरी बेहोस हुने समस्या ठिक नभएपछि थप उपचारका लागि भारततर्फ लगिएको उनका श्रीमान् जगदीश जोशीले […]
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सीको सम्मानमा आयोजित रात्री भोजमा प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्र सहभागी
October 12, 2019 kandai kanda 1
काठमाडौं: दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङलाई राष्ट्रपति भण्डारीले होटल सोल्टीमा रात्रिभोज दिएकी हुन्। रात्रिभोजमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उप प्रधानमन्त्री एवं […]
October 8, 2019 kandai kanda 1
कविता बस्ती बिम्ब -सुमित्रा अश्रुधारा उफ कस्तो गरि सुनसान यो शहर मानबता बोकेका केही मन शहर बाहिर निस्किएर होला………… चकमन्ताको एक लहर मेरो निन्द्रा चोरेर भाग्यो खै के के खेल्यो मनमा निदै परेन……… खुब सम्झिरहेको छु सरङमा झुंडाएको सुगुरको […]
शनिबार । बेलबारी ११ लक्ष्मीमार्गमा जारी बेलबारी अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित गोल्डकपको शनिबार तोकिएको फाईनल खेल बर्षाका कारण स्थगित भएको छ । शनिबार बिहानैदेखिको बर्षाका कारण खेल स्थगित गरिएको आयोजक डाँगीहाट युथ क्लबका अध्यक्ष बिक्रम बान्तावा राईले जानकारी दिएका छन । अब […]
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्ट घटनाको अनुसन्धान भीरकट्याको बाटोमा अड्किएको छ । भागरथी पढ्ने विद्यालयदेखि झण्डै ५ सय मिटर दुरीमा रहेको भीरकट्याबाट घटनास्थलसम्मको सम्पर्क प्रहरीले जुटाउन सकिरहेको छैन । भागरथी माघ २१ गते दिउँसो १ बजेर ४५ […]
ओलीको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले “नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ” भन्दै घन्काए इजलास
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते सिफारिस गरेका थिए भने सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यो कदमविरुद्ध […]
माइतीघरमा धर्ना बसे प्रचण्ड र माधव नेपाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल आइतबार माइतीघरमा धर्ना बसेका छन्। गत बुधबारदेखि प्रचण्ड(नेपाल पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर […]
फाल्गुन १३ गते बिहिबारको राशिफल
फाल्गुन १२ गते बुधबारको राशिफल
फाल्गुन ११ गते मगंलबारको राशिफल
कसरी रहने जवान, तन्दुरुस्त र स्वस्थ ?
काठमाडौं । स्वस्थ, तन्दुरुस्त कसरी रहने ? यसको कुनै त्यस्तो सूत्र छैन, जो तपाईं÷हाम्रो जीवनमा पूर्णत लागु गर्न सकियोस् । यद्यपि सामान्य दिनचर्यालाई बदलेर वा खानपान र आनीबानी परिवर्तन गरेर हामीले निरोगी जीवन बाँच्न सक्छौं [...]
विदेश जान हिंडेका श्रीमान काठमाडौं आएर श्रीमतीको फेसबुकको प्रोफाइल खोलेर हेर्दा जे देखे
यो घटना दाङ तुलसीपुरको हो । एक जना पुरुष श्रीमती र छोरीलाई बिचल्ली पारेर हराए । अर्की महिला लिएर हिडेपछि घरमा श्रीमती र सानी छोरीको बिचल्ली भएको छ । २३ वर्षको सानै उमेरमा सानो छोरीको जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने समस्या […]
काठमाण्डौ । माछाको रक्षा नाग नागीनले गरेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो । त्यो पनि नेपालमै । काठमाण्डौबाट झण्डै २ किलोमिटर पर चोभार भनिने ठाउँमा एउटा यस्तो पोखरी छ जहाँ माछाको रक्षा त्यस […]